PBT အီးယူကို client Club တီဗီ Ibiza နှင့် Formentera အတွက်မိတ်ဆက် - - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » PBT အီးယူကို client Club တီဗီ Ibiza နှင့် Formentera အတွက်မိတ်ဆက် -
PBT အီးယူကို client Club တီဗီ Ibiza နှင့် Formentera အတွက်မိတ်ဆက် -
Club တီဗီ Ibiza နှင့် Formentera ရဲ့ဂီတမြင်ကွင်း enlivens -
PBT အီးယူရဲ့ client ကိုကလပ်တီဗီ Ibiza နှင့် Formentera ၏ 24 နာရီပါတီကျွန်းများမှ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မြေပြင်ရုပ်သံအပေါ်အသံလွှင့် (DTT) ကွန်ယက် HD, Club တီဗီထက်ပို 1500 နာရီနှင့်အတူ 700 ခေါင်းစဉ်ကျော်ပါဝင်သောတစ်ဦးအထင်ကြီး VOD အစုစုနှင့်အတူဝယ်လိုအားအပေါ်လည်းရရှိနိုင် HD 300K အကြောင်းအရာနှင့်4နာရီ။
သူတို့ Rostelecom ပေါ်တွင် "Club တီဗီရုရှားက" စတင်သောအခါအီလက်ထရောနစ်ဂီတမြင်ကွင်းမှသီးသန့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထား, Club တီဗီပြီးသားပြီးခဲ့သည့်နှစ်က PBT အီးယူထံမှ PlayBox နည်းပညာရဲ့ AirBox Neo ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။
"ကျနော်တို့ကကလပ်တီဗီကဲ့သို့သောပြောင်းလဲနေသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့အလွန်ဂုဏ်ယူဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်ဥရောပရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးတစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွဲဆင်နွှဲ HD ၎င်းတို့၏အမျိုးစုံရစတိုင်အဘို့အကျော်ကြားဂီတရုပ်သံလိုင်း။ ဒါဟာသူတို့ကိုထိထိရောက်ရောက်ချုပ်ပရိသတ်တွေထံအရောက်သွားနေဖြင့်အစွမ်းသတ္တိကိုမှခွန်အားသွားနှင့်စပိန်ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးကလပ်လမ်းကြောင်းသစ်အစက်အပြောက်ကိုဖြတ်ပြီးထုတ်လွှင့်ကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ "ဟု PBT အီးယူရဲ့အရောင်းဒါရိုက်တာအလက်ဇန္ဒား Stoyanov မှတ်ချက်ပြုထားသည်။
PBT အီးယူရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထောက်ခံမှုအဖွဲ့သည် "Club တီဗီ Stephane Schweitzer အတည်ပြု၏ CEO နှင့်တည်ထောင်သူ" Club တီဗီဖြူကျွန်းပေါ်တွင်ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်းခင်ကအချိန်ပဲတဲ့ကိစ္စပါ "ခြားနား - သူတို့အတွက်မြောက်မြားစွာဆာဗာများကိုဖြတ်ပြီးကျယ်ပြန့်သောအကြောင်းအရာများကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်နှင့်အတူကူညီပေးခဲ့ တစ်ဦးချင်းစီနယ်မြေ။ "
"Ibiza နှင့် Formentera တသမတ်တည်း 24 /7အချိန်ဇယားဆွဲတောင်းဆိုချက်တွေကိုနှိပ်မှကယ်တင်နိုင်မှလက်မှာအကောင်းဆုံးနည်းပညာနှင့်ပံ့ပိုးမှုရှိသည်ဖို့လူငယ်တစ်ဦး, တက်ကြွပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်, နှင့်၎င်း၏အားရစရာ," Club တီဗီ Nikolai Nachev မှာအထွေထွေမန်နေဂျာကထပ်ပြောသည်။
"PBT အီးယူကိုတစ်ကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်အချိန်အထိခိုက်မခံမကယ်မလွှတ်ဘို့, PlayBox '' AirBox Neo ကိုကနေတဆင့်နေ့စဉ်ဖွင့်စာရင်းများကိုသို့တိုက်ရိုက်စာကျွေး၏အောင်မြင်သောစားသုံးမိခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုသေချာစေရန်ဒီမှာအရေးပါအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ "
Clubbing တီဗီကြီးတွေပွဲတော်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ကနေအထိ၎င်း၏ပိုမိုစုံလင်လာသီချင်းစာရင်းကိုအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအကအခုန်ဂီတအမျိုးအစားများများအတွက်ပြောင်းလဲနေသောစကားသံကိုထောက်ပံ့; ကခုန်ဂီတမြင်ကွင်းကနေ DJ သမားအင်တာဗျူးများ; လူနေမှုပုံစံစတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်; DJ သမားသတ်မှတ်ပေးသည်; ဒဏ္ဍာရီနှင့်လာမည့်အနုပညာရှင်တွေနှင့်အတူတိုက်ရိုက်တမန်တော်; ပြီးနောက်-ရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးများ; ရှိုးပွဲစကားပြောနှင့်လက်ကောက်ယူသီချင်းဗီဒီယိုများထောင်ပေါင်းများစွာ၏။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Club တီဗီရဲ့ Ibiza အသင်းကိုလည်းထပ်မံသန့်စင်သော Ibiza ရေဒီယိုနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. နေ့စဉ်တိုက်ရိုက် DJ သမားသတ်မှတ်ပေးသည်အပါအဝင်တစ်ဦးပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့လက်ခံ Balearic ကျွန်းဒေသခံတဦးအဖြစ် Club တီဗီရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအားပေးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်နှင့်ဒေသခံပရီမီယံအကြောင်းအရာအချို့ကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဤရွေ့ကားတက်ကြွရှိုး multi-ကင်မရာအပြည့်အဝအတွင်းထုတ်လုပ်နေကြပြီး HD ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထင်ရှားသောပွဲတော်များ, ဖျော်ဖြေပွဲမှာ Club တီဗီရဲ့ပဲရစ်စတူဒီယိုနှင့်ကျွန်းတည်နေရာမှာဒေသအလိုက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
တည်ထောင်သူ Stephane Schweitzer အဆိုပါပါတီ Club တီဗီနှင့်အတူရပ်ဘယ်တော့မှ "ကောက်ချက်ချ! ကြှနျုပျတို့၏ channel ယိရဲ့အဘယ်သို့သောအကြောင်းဖွင့်ယနေ့အထိကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကျနော်တို့လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှင့် Ibiza တဝိုက်အပြည့်အဝအသိပေးထားသောဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်ကြိုက်တယ်။ DJ သမားအစုံ, အကောင်းဆုံးပွဲတော်များ, လူနေမှုပုံစံစတဲ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်အစီအစဉ်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်: - ဤတီဗီ Ibiza Clubbing ဖြစ်ပါတယ် "!
ဒီမှာ Club တီဗီ Ibiza ကြော်ငြာဗီဒီယိုတွင်တစ်ကြိမ် Watch: pro.clubbingtv.com/showreel_ibiza
တီဗွီချန်နယ်« Club တီဗီ»ဇာတိအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် HD နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့။ ဒါဟာနှစ်တစ်ထောင်မျိုးဆက်၏အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်သီးသန့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအီလက်ထရောနစ်ဂီတဖြစ်ရပ်များ, ကလပ်ယဉ်ကျေးမှု, Club နေရာများ, ပွဲတော်များနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲများလွှမ်းခြုံအသက်ရှင်ရန်အပျနှံခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ TV ကိုရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 24 /7ချန်နယ်အကောင်းဆုံးတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များ, DJs, ဂီတဗီဒီယိုများ, လူနေမှုပုံစံစတဲ့အစီအစဉ်များနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အပူဆုံးကခုန်ကြမ်းပြင်များနှင့်လျှပ်စစ်ပွဲတော်ကနေပါတီအစီရင်ခံစာများတတ်၏။ တီဗီ Clubbing အားလုံးအီလက်ထရောနစ်ဂီတစတိုင်များနှင့်အရသာကိုယ်စားပြု 100 သီးသန့်ပြပွဲနှင့်အတူ 50 နိုင်ငံများတွင်ထက်ပို 20 သန်းအိမ်ထောင်စုအတွက်ကခုန်ဂီတရရှိနိုင်စေသည်။ အပြည့်အဝလူမှုမီဒီယာအပြန်အလှန်အတူ Live Show & ဖျော်ဖြေပွဲနှင့်2အပတ်စဉ်သီးသန့်ပြပွဲ၏4နာရီထက်အပတ်တိုင်းပိုပြီးတီဗီထုတ်လွှင့် Clubbing ။ အဆိုပါ« Club အတွေ့အကြုံ»ပြပွဲ, ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်ပွဲတော်များ, တိုက်ရိုက် DJ သမားကိုသတ်မှတ်ရန်, TOP ဇယားနဲ့ရူးသွပ်အင်တာဗျူးအယူအဆ "The Big မကောင်းပါ Box ကို" မှနထေိုငျ Club တီဗီရဲ့သီးသန့်ပရီမီယံအကြောင်းအရာပဲသေးငယ်တဲ့ preview ကိုဖြစ်ကြသည်။ မှာသူတို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု www.clubbingtv.com
PBT အီးယူကိုဆက်သွယ်ရန်: အလက်ဇန်းဒါး Stoyanov အရောင်းဒါရိုက်တာ & Partner, [အီးမေးလျ protected]+ 3592439 21 90
တူးမြောင်း + မြန်မာအပြည်ပြည်သွား Profuz ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ LAPIS ရွေးချယ် - သြဂုတ်လ 28, 2019
Intermedia 2019 Warsaw ကိုညီလာခံမှာ SubtitleNEXT- ရွှေပံ့ပိုးကူညီ - ဇူလိုင်လ 2, 2019
Media4All မှာ AV စနစ်, ဘာသာဗေဒ & မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်း၏ရှေ့တန်းမှမှာ SubtitleNEXT - - ဇွန်လ 28, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-06-14
ယခင်: Matrox®ဧကရာဇ် EDGE နှင့်အတူအများစုမှာသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော webcasts Workflows Powering
နောက်တစ်ခု: TV18 အသံလွှင့်အိန္ဒိယကျော် 100 LiveU LU600 HEVC ယူနစ်နှင့်အတူ၎င်း၏ Newsgathering စစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်